A ga - enwe ndị isi na - agagharị na ikpe Jeffrey Epstein? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 21 August 2019	• 6 Comments
isi mmalite: people.com
Mgbe esemokwu niile gbasara okwu Jeffrey Epstein, nke onye isi Britain bụ Andrew ga-enwetara, ma aha ndị ọzọ dị ka Freddy Heineken ga-apụta, ị ga-eche na ugbu a ndị isi ga-agbagharị. Kedu ihe anyị siri ike. Ọ ka na-esiri ike icheta na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị n'aka ndị isi ahụ na usoro mgbasa ozi ọzọ dịkwa na nnukwu aka. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ikpe dị ka Epstein abawanye na akụkọ, nke a na-eme naanị n'ihi na akwadoro ya. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị ahụ ya; a na-emechi ya ma ọ nweghị otu ụzọ mgbasa ozi na-ahụkarị nke na-elebara ya anya maka ọbụna nke abụọ.
Yabụ olileanya ụgha. Onweghi isi ga-efegharị. Eziokwu ahụ bụ na e gburu Jeffrey Epstein ma ọ bụ kwụkwasị ya na blanketị ụlọ mkpọrọ (nke kwesịrị ịdọpụ) na ụlọ mkpọrọ na-enweghị nduzi, bụkwa naanị mkparịta ụka iji mee ka ụbụrụ ahụ nwee obi ụtọ. Ọ bụ nchacha niile nwere ọdịnaya. O nweghị ihe anyị ma. Epstein nwere ike ịnwụ, ọ ka nwere ike ịdị ndụ, nwere ike rụọ ọrụ ọmarịcha plastik, ma ọ bụ nwee ugbu a dịka nwanyị. N'oge dị ugbu a ebe ị nwere ike iji sọftụwia dị mkpa ma nwee ihe adịgboroja, anyị amabeghị ma Epstein nọ n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ na akpọpụrụ ya n'ezie n'elu onye na-agbatị ya. Anyị amataghị ma akụkọ na akaebe ziri ezi.
Naanị ihe anyị maara bụ na a kpọrọ ‘pedophile’ ọkụ na retina anyị kwa ụbọchị. Dị ka ọ dị na Jimmy Savile, a na-egbochi okwu ahụ site na Epstein ka ọ nwee mmasị na mmekọahụ maka ụmụ nwanyị dị obere. Ya mere, okwu a bu 'pedophilia' dika ihe akari bu ihe eji egosi mmekorita nwoke na nwanyi. Nke ahụ yikwara m ihe mgbaru ọsọ bụ isi ncha a. Anyị niile maara site na ikpe Amsterdam Robert M. na ezigbo pedophilia na-emetụta mmegbu mmekọahụ nke ụmụaka na-eto eto; site na umu aka rue umu aka.
Okwu a bu 'pedophilia' nwere okwu 'filie' n’ime ya, nke negosi ‘ima’ n’ebe nwata ahu di. Anyị makwaara, dịka ọmụmaatụ, dị ka di na nwunye nwere mmekọ nwoke na nwanyị ị nwere ike ịzụlite ụmụ gbara ọchịchịrị si Afrịka ma si otú a na-egosipụta ịhụnanya gị maka nwatakịrị ahụ n'ime mgbidi ọwa mmiri Amsterdam, mana ezigbo 'pedophilia' enweghị ihe ọ bụla metụtara ịhụnanya. Anyị na-ekwu okwu banyere agụụ nke anụ ọhịa iji mesoo ụmụaka na-enweghị nchebe n'okpuru achịcha ịhụnanya ma ọ bụ mmasị mmekọahụ.
Okwu ndị dị ka nke Jeffrey Epstein yiri ka ebumnuche iji bido njikọta na mmetọ ụmụaka, ụmụ na ụmụ na ndị na-aga ebe obibi na 'inwe mmekọahụ na ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke, "na ọtụtụ ndị nwere ike ichetụ n'echiche ihe. Anyị na-agba mgbasa ozi siri ike iji mee ka pedophilia ghọọ "mmasị mmekọahụ kachasị mma."
Terre des Hommes na usoro dị nwayọọ site na okwu ahụ bụ 'nwa mmegbu ụmụaka' ka 'pedosexual'
Pedophile Jeffrey Epstein nyocha nke neuroscientific na-abanye na netwọọk AI kachasị mkpa n'ụwa
Tags: Andrew, Epstein, agba, Freddy, Heineken, Jeffrey, eto eto, ụmụ agbọghọ, mmegbu, pedofilie, onyeisi, mmekọahụ
21 August 2019 na 15: 15
"O ka dikwa ike icheta na ulo oru mgbasa ozi di n'aka ndi isi a, na usoro mgbasa ozi ozo sokwa n'ike. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ikpe dị ka Epstein abawanye na akụkọ, ọ ga-eme nke a n'ihi na ọ na-eme atụmatụ. ”
Nke a bụ eziokwu na usoro mgbasa ozi ọzọ nwere obi ụtọ naanị ileghara.
Nke a apụtaghị na nkwupụta a na-ekwu enweghị ike ịbụ eziokwu, m n'eziokwu na amaghị m ihe bụ ma ọ bụ na-abụghị eziokwu. Ma amaara m na ọ bụghị naanị na ọ bụ ‘akụkọ’ na mberede n’usoro mgbasa ozi.
Enwere ezigbo ohere na Epstein ga-abụ abụ n'agwaetiti ya na afọ ikpeazụ nke ndụ ya, onye maara?
25 August 2019 na 17: 16
Banyere okwu ndị dị ka Epstein, ị ga-ajụrịrị: WHOnye KWURU EGO A?!?!
22 August 2019 na 02: 57
Ndi ahu apughi iguzo. Anyị ekwesịghịdị ịma ha ikpe. Ọ bụrụ n’ịlaghachi n’ikpeazụ n’ụdị mbụ ma jiri anya gị mee ihe niile, ị ga-ahụ maka nsonaazụ gị. Nke a apụtaghị na n'ime ebe a na ugbu a anaghị m eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ụfọdụ ọnụọgụ na-arịa ọrịa na-emebi ụmụaka. Anyị ga-ahụ ma emesịa ọ bụrụ na m pụọ ya ma ọ bụrụ na m wepụrụ ya.
Mana i kwuru eziokwu, ha na-emebi ikike ya ma na-akwalite ụkpụrụ ọhụụ. Nke a bụ ihe kacha njọ na ọchịchịrị na-eme n’ụwa.
22 August 2019 na 03: 00
Imirikiti nọ ebe ahụ ma lelee ya.
24 August 2019 na 21: 24
Anọ m na-achọ ebe nke a ga-ejedebe. O buru amụma na a ga-ekenye ndị na-edina ụmụaka ihe dịịrị ha. Karịsịa ka ị ghara igwa onye ọka ikpe gị. Nwere ike ijikwa ọnụ ọgụgụ ndị a n'onwe gị, ịnweghị ịgbanye mmadụ ise.
25 August 2019 na 17: 12
Ọgbụgba ọkụ na onodu a bụ ihe mkparị maka alaeze anụmanụ! Anyị maara na ọdụm riri ụmụ ya ka ha nwee ike nwee ike soro nwunye ọdụ ọsọ. Ọdụm ga-agbachitere ụmụ ya ruo ọnwụ. Na alaeze nke Chineke dịịrị mmadụ, a na-amata ụmụaka ka o were rie Setan ka o were rie mmadụ n'ụzọ nkịtị.
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ na ọrịa Setan a bụ nke kachasị ma ọ bụ nke na - adịkarị na nke a na - akpọ okirikiri dị elu. N'ihi na ha wee pụọ na ya? Ma ọ bụ onye na-edina ụmụaka, nwoke idina nwoke na nwanyị, nwoke na nwanyị ịlụ nwanyị ibe ya dị elu nke na n'oge na-adịghị anya a gaghị enwe ndị “nkịtị”. Dabere na Robert steel, n'ime na gburugburu White House (Anyị nwere Round House na Nunspeet) ọ nweghịzi onye na-adịghị edina ụmụaka ma ọ bụ nwoke idina nwanyị. Mmeputakwa na-ewere ọnọdụ naanị site na ntinye mbipụta anụ ụlọ et. wdg.
" Esemokwu maka usoro ochichi onye kwuo uche (FvD) buru amụma
Ndị Amazon na-ere ọkụ, ngụgụ nke ụwa na-ere ọkụ! »
Nleta nile: 12.333.763